Ọgụgụ M Na-esote: Ahịa gravitational | Martech Zone
Na-esote na ndepụta ọgụgụ (nke na-agbakọ elu) bụ Ahịa Gravitational.
The mma folks na Wiley zitere m ahịa Book - ha ga-ghọtara na m a ọkpọ maka Marketing akwụkwọ. Maka ndị gị na-ezere akwụkwọ azụmaahịa dịka ihe otiti mana ọ na-amasị ịmụ omume mmadụ… nke ahụ bụ ihe m hụrụ n'anya gbasara akwụkwọ ahịa.
Otu onye juru m mgbe obula m mutara Sociology. Echere m na m nwere na a echiche… m kwere na nke ahụ bụ ihe Marketing bụ ihe niile banyere. Anaghị m ekwupụta na m ghọtara ọtụtụ ihe banyere omume mmadụ, mana ọ masịrị m idebe ya na ịkekọrịta ihe m hụrụ.
Ahịa gravitational, Sayensị nke Na-adọta Ndị Ahịa, nwere mkpuchi mara mma, ịgba agba saịtị, slick blog, na nkọwa mara mma mara mma:
Ahịa Gravitational na-enye ndị ọchụnta ego, ndị nwe ụlọ ahịa, ndị ahịa na ndị ahịa azụmaahịa ụzọ dị mfe iji dọta ndị ahịa na imechi ahịa na-enweghị ịrụ ọrụ ahịa aka dịka ịkpọ oku oyi, ịtụ anya ma ọ bụ ịrịọ maka azụmahịa.
Edere ya maka ndị chọrọ ire ahịa, uru, ndị ahịa na ego na akpa ha mana ha ga-ahọrọ ime ya na-enweghị ọrụ aka, akwụkwọ a na-ekpughe ụkpụrụ nke na-adọta ndị ahịa n'ụzọ dị mfe ma na-ere ahịa na-enweghị nsogbu na enweghị nsogbu, in¬your¬face, hardsell si eme. Ọ na - ejikọ ndụmọdụ bara uru dabere na usoro anwale ma nwapụta yana akụkọ sitere na trenches, nnukwu waya na - enweghị net na ahịa na ahụmịhe ahịa.
Abụghị m otu maka ịgba agba, ma agaghị m kpee akwukwọ-ya akwukwọ-nkpuchi [bu n'obi]. Ntughari site n'aka ndị edemede ndị ọzọ na-ada ka akwụkwọ ahụ na-atọ ọchị, na-akụ aka ike, na n'ihu gị. Nke ahụ anaghị ada ụda dịka mgbasa ozi… ọ dị ka akwụkwọ m ga-anụrịrị ụtọ.
Nwere ike ibudata ihe ihe edemede nke Ahịa gravitational na weebụsaịtị ndị edemede. Aga m ekekọrịta echiche m banyere akwụkwọ na izu ole na ole ozugbo m gụsịrị ya.
Tags: na-adọta ndị ahịaahịa ndọdaJimmy VeeJoel Bauerakwụkwọ ahịaTravis Millerwiley
Nke a dị ka nnukwu akwụkwọ. Achọrọ m ka ha zitere m otu iji gụọ ma nyochaa. Aga m etinye ya na ndepụta m, nke na-eto site na mmali na oke ugbu a.
Enwere m mmasị na ndị ahịa ịbịakwute gị - site na ike ndọda. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma, ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ kwenyere na ha chọrọ ngwaahịa ahụ na mbụ, ọ bụghị na ị gbanyere ngwaahịa ahụ na ha. Daalụ maka ndị isi na akwụkwọ a.